Oromo | KWIT
Oromo News 07.19.21
By Fatiya Adam • Jul 20, 2021
Oromo News 07/19/2021
Manneen barumsa Nebraska keessati barataan tokko nama Covid-19 qabame waliin yoo kan wal arguu adda baafame akka taau seeru jedhu ogeeyyota manneen fayyaa naanicha fi Federal akka walitti buusise himan.
State Department kan Fayyaa fi Human Service ammo akka mana barumsaati himanitti barattooni nama corona virus qabame wajjiin yoo kan argamanii addaa baafamani taau hin qaban hanga malattooni irrati mulatuti jedhani jiru.
Oromo News 07.16.21
By Fatiya Adam • Jul 17, 2021
Oromo News 07/16/2021
Jiraattoni hundi isaanu dalagaa dalaguuf soquu waan jiraniif June keessa hojii dhabummaan gara 4% gahee jira. Iowa Workforce Development akka guyyaa jum’aa gabaasanitti hojii dhabdummaan May keessa 3.95 kan turee dabalee jira.
Oromo News 07.15.21
By Fatiya Adam • Jul 16, 2021
Oromo News 07/15/2021
Ogeeyyonni Akka jedhanitti jidduu Iowa fi eastern Iowa keessati bubbee uumamen namni miidhame akka hin jirre gabaasan, garuu baayen bubbeedhan kan miidhame kan akka fooqidhan karaa irraa , mukkiini, fi makiidhan gargaltee argani jiran. National weather service akka jedhanitti bubbeen kun guyyaa kaleesa seaati booda gara galgalaa bakka baadiyaati fi bakka namni hin jirreeti akka tae himan.
Oromo News 07.14.21
By Fatiya Adam • Jul 15, 2021
Oromo News 07/14/2021
Barataa University Iowa Mollie Tibbetts sajjjeesudhan jedhame kan irrati murtaahe daanyan umata biraa kan marajaa biraa argachuuf yeroon akka barbaachisu erga himan booda daanyan tokko yeroo qixaata isaa hir’isuuf akka hoatu jiru hime.
Cristhian Bahena River (Christian Buh-hay-nuh Reh-vair-uh) guyyaa kamsaa haali gad dhiifame osoo hin jiraatan umrii isaani guutu akka hidhaman yaadame ture.
Oromo News 07.13.21
By Fatiya Adam • Jul 14, 2021
Oromo News 07/13/2021
Oromo News 07.12.21
By Fatiya Adam • Jul 13, 2021
Oromo News 07/12/2021
State Siouxland sadihii keessa bulchitooni kan walitti qabaman guyyaa isaani kan dabarsan magaala Sioux City keessa kan argamu bakka conference Marriott irrati argamanii jiru.
Siouxland Chamber ka commerce qophaahe sun biyyati keesati hir’innaa hojattoota dhabuu irra ture.
Waliigalteen jidduu Iowa fi Texas godhamee Iowa dinbaraa Mexico irrati badiin dhooguf wattaa dalaagtoota mootumaf fi meesha jaraa “no cost to texas” qarqaaru irra jiran.
Oromo News 07.08.21
By Fatiya Adam • Jul 9, 2021
Oromo News 07/08/2021
Doctor tokkofoon University kan Nebraskamedicalcenter waae Covid19 haarawa kan seene kan nama kamuuf akka sodaachisa tae himan.
State torbaan darbe keessa namni haarawa 450 qabamuu himan kuni ammoo torbaan san duraa irraa harka 55% akka dabalee jiru himan.
Dr.James Lawler akka jedhetti dhukubni deltavariant baaychu isaa baayachu hin akka hin ajaaibne himan akkasumas namni baayen talaali coronavirus hin fudhatin baaye waan jiraniif.
Oromo News 07.07.21
By Fatiya Adam • Jul 8, 2021
Oromo News 07/07/2021
Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid19 hospitaala jiran akka gad xiqqaate himan, haatau malee lakkofsi waggaa darbeen wal bira kalaahus ga xiqqaate jira. Hospitala keessati baayate kan dhufe deltavariant gosa corona virus Iowa keessati baayachu akka deemu maluu himan.
Deparment mana fayyaa Iowa akka jedhanitti sababa coronavirus namni hospitaala yaalamu jiruu nama 85 dha, torbaan lama dura nama 50 dhaankan tureedha
Oromo News 07.06.21
By Fatiya Adam • Jul 7, 2021
Oromo News 07/06/2021
Bulchitoonni naannicha torbaan kana dhuma irratti balaa duaaf nama saaxilu adventureland naanawa waggaa shanii kan qorataa turan har’a himan. Inspector akka kan arganitti yeroo sanitti code wahiitu ka hin jirre akka tae himan. Abbaan mucaa kan umrii 11duesun akka himmeti beltiin warra isaa akka qabe himan.
Oromo News 07.02.21
By Fatiya Adam • Jul 3, 2021
Oromo News 07/02/2021
Iowa keessatti rooba guddaa,snowfi lollaadhan guutamtus June keessa akka biyyati guututi haala jiidhinsa gaari keessa akka jirtu himan.
NationalWeatherservice akka jedhetti jia kana qixxee irraa biyyaa hooinan sadarka kudhan keessa jirtu turte jedhan.
SoutheasternIowa keessa June qixxee isaa bubbee Inches11 fidee ture. Qonnaan bultoota Plymouth County keessa jiraattan miidhan baradoo irra gahee ture.
Oromo News 06.30.21
By Fatiya Adam • Jul 1, 2021
Oromo News 06/30/2021
Jiraattan SiouxCity tokko kan safara Morningside ayyaana bara haarawa irrati nama ajjeesse hidhaa waggaa 55 itti murtaahe jira.
Umrii waggaa 20 kan tae ChristopherMorales 2nd degreemurder dhaan irra murtaahe mucatti waggaa 18 Mia Kristis ajjeesudhan.
Obboleesi isaati fi namni biraa sababuma ajjeecha kan murtiin irrati murtaahe jira.
Oromo News 06.29.21
By Fatiya Adam • Jun 30, 2021
Oromo News 06/29/2021
Ganama har’aa DakotaCity keessati baaburri walitti bu’uunsa isaa himame.Locomotive lamaa fi makiina sadihii tarck keessa bahanii jirani erga baaburri dhahe booda. Namni miidhame hin jiru.
Seera WoodburyCounty kan haarawa kan seera murteessan lafa irrati September 15th akka tae himan.
Walgahiin kaleessa boordi walgahee turee irrati ijaarasi irrati wilii waliin faramanii jiraachu himan.
Oromo News 06.28.21
By Fatiya Adam • Jun 29, 2021
Oromo News 06/28/2021
Governor Pete Ricketts seera Covid-19 kan emergencyNebraska keessa haqee jira.
Waggaa darbee March13th kan jalqabe ture. Seera baayinnan isaa jiea dhuma kan irrati kan kasutuu akka tae himan.
Ricketts akka jedhetti namni amma hospitaala keessati yaalama jiru akka state nama 27 qofa waan taeef akkuma normal qaraati deebiu akka qabamus hime.
Dhukuba kanna hir’isuuf namni talaali akka fudhuchaa qabu yaadachiisani jiran.
Oromo News 06.24.21
By Fatiya Adam • Jun 25, 2021
Oromo News 06/24/2021
Guyyaa har’aa Governor Kim Reynonlds akka gabaastetti warra police fi mirga eeydota boordari U.S Southern erguu jirani akkasuma eeydata boordara sababa kana godhaniis sababa Governor Taxes Greg Abbot fi kan Arizone Doug Duccey waan gaafataniifi emergency dhaaf. Reynolds akka jetteti drug baayachuu fi dirqiin kan nama hatan fi violent crime hir’isuu waan dadhabaniif.
Oromo News 06.23.21
By Fatiya Adam • Jun 24, 2021
Oromo News 06/23/2021
Oromo News 06.22.21
By Fatiya Adam • Jun 23, 2021
Oromo News 06/22/2021
Wiyxata seaati booda Woodbury County keessati itti gaafatamttoni jalqaba dhagesissaa ummataa ejjanoo kan godhaa turanii. Jarrii kan barbaadan potential ordinance wind energy kan marfameedha. Dandeetinis kibxata lamaan dhufuuf kan karoorfamedha.hojattooni wind industry gara nama 10,000 Iowa keessati kan gahan yoo tau doolara million 58 kan kafalamuudha state fi local taxes illee.
Oromo News 06.21.21
By Fatiya Adam • Jun 22, 2021
Oromo News 06/21/2021
State Iowa keessati namni sababa Covid-19 qabamuu fi hospitaala seenu gad xiqaate deemu jira.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka himanitti corona virus dhaan namni haarawa qabame kan hin jirre yoo tau namni haarawa qabame ammo nama 30 dha. Akka dhukkubni jalqabe namni namni waliigalatti due 6,114 dha. Jiraattoni Iowa million kixxee ta’an talaali corona virus guutumatti fudhatani jirani.
Oromo News 06.18.21
By Fatiya Adam • Jun 19, 2021
Oromo News 06/18/2021
Nebraska fi South Dakota ayyaana federal Juneteenth kabajuudhaf har’a barrii biirrowan State cufanii jirani. Juneteenth ayyaana United State keessati bara 1865, June 19 irraa jalqabe nama gabroomsu dhaabamun kan kabajamuudha.
Haataumalee, Governor Iowa Kim Reynolds waaye Juneteenth irraa homa hin dubanne. State ayyaana kana bara 2002 irraa ayyanefachuu kan jalqabaniidha, haatau malee hojattooni guyyaa kafalamee kan dalagaa hafanidha.
Oromo News 06.17.21
By Fatiya Adam • Jun 18, 2021
Oromo News 06/17/2021
Governor Iowa Kim Reynolds seera “Back the blue” jedhu ganama kana deebisuf irrati farramtee jirti.
Warra gabaastonni akka jedhanitti seeri kunis waaye nageenya public akka tae himan.
Warri isa hin deegarre akka jedhanitti faalla isaati jedhan.
Oromo News 06.16.21
By Fatiya Adam • Jun 16, 2021
Oromo News 06/16/2021
Governor Iowa Kim Reynolds qabeenya haakima naanicha kan gibira irraa balleesun qarqaarsa haakima kan sammuu kan qarqaaru gibira jedhan mallateesite jirti.
Tarkaanfin kun kan guyyaa harbaa seera tae kun bara 2025 mootuman kan kaffalu yoo taus waggaa sadi dura kan ibsame galiin hir’achuu bara 2023 kan January kan jalqabu akka tae himan.
Oromo News 06.15.21
Oromo News 06/15/2021
Oromo News 06.11.21
By Fatiya Adam • Jun 11, 2021
Oromo News: 06/11/2021
Police Sioux City April 29 Perkins irrati “use of force” haala madaalu hojattoota san kan irrati hirmaatan hunda isaani irratu addabii fudhate jirani.
Facebook irrati video tokkoo gad dhiifame babal’ataa ture officer roota seera jala turan fi nama guaracha kan hidhamu jidduuti kan turee dha.
Oromo News 06.10.21
Seera baaftonni naannicha Iowa keessati karaa irrati nama duan hir’isuuf Governor traffic qarqaarun irra akka jiran himan.
Deparmantin transport kan Iowa namni karaa irrati due waggaa darbe irraa percent 25 % akka dabale himan.
Iowa state patrol akka Des Moines rigester himmeti waggaa 85 san kaapbani keessati nama baaye speedan oofu fi nama silkii fayyadama makiina oofu akka baayinan mulataa jiru himan.
Oromo News 06.09.21
By Fatiya Adam • Jun 9, 2021
Oromo News 06/09/2021
Iowan ammaan booda talaali ufii yookin kan ijoole isaani hordafuuf website state hordufuun akka isaan hin barbaachifne himan.
Jijjiiramni kan dhufe hojifitooni hojattoota talaali corona virus akka fudhachuu qaban erga itti himaa turani boodadha, akkasumas passport talaali fayadamanii fi seera mootuman baasu irrati.
Oromo News 06.08.21 (Evening)
By Fatiya Adam • Jun 8, 2021
Oromo News 06/08/2021
Hoogganaa dura bu’aan Siouxland District Health akka jedhenatti wayta waaye talaali Covid-19 himanitti jiraattoni Woodbury County parsantii 36% ta’an akka talaali corona virus guutuman guututti akka fudhatani jiran himan. Namni parsanti 40% ol ta’an ammo talaali jalqaba akka fudhatani jiran himan.
Oromo News 05.29.21
By Halima Osman • May 29, 2021
Barataan Iowa University kan bara 2018 keessa ajjeefame ture ajjeefamu isaatin kan itti gaafatamumma tae argame mucaan qonnaan bulaa tokko first-degree tauu himanii jiru.
Cristhian (Christian) Bahena (Buh-he-nuh) Rivera umrii isaa guutu kan mana hidhaa keessati dabarsuu tauu isaa himan.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka jedhaniiti namni haarawa Covid-19 due 3 yoo tau kan haarawa qabame ammo 99 dha.
Oromo News 05.28.21
By Fatiya Adam • May 28, 2021
Unicameral kan Nebraska yeroo isaa fixee jira, governor hir’inni tax himuudhan tax muruu jedhanii jiru.
Seera baasan food stamp fi program qarqaarsa hooa governor Ricketts vetoes dabarsani jiru.
Seera haarawa bahanitti jiraattota Nebraska 4,000 ta’an qarqaarsa nyaata kan federal dhaaf akka hayyamaman isaa gargaarsa federal ooisa kan qarqaaru ta’a.
Guyyaa har’aa magaala Sioux City tti Nyaanni biraa haarawa kan giveaway hawaasa keessati akka qarqaarsa qabu himan.
Oromo News 05.26.21
By Fatiya Adam • May 26, 2021
Oromo News 05/26/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasaniti namni haarawa due kan hin jirreefi waliigalatti akka dhukkubnni jalqabe sababa Covid-19 namni duee 6,035 akka tae himaa. Namni haarawa qabame ammoo 170 dha, namni 6 Woodbury County keessa kan jiruudha.
Oromo News 05.25.21
By Fatiya Adam • May 25, 2021
Oromo News 05/25/2021
Bulchaan Nebraska Pete Ricketts akka oduu yaa’ii guyyaa har’aa irrati June 1st irraa jalqabee sababa dhukkuba irraa seera bahee ture mara isaatu akka dhaabatto malatteese jira.
Governor sababa hojii dhabdoota Iowa ttif bu’aa Covid-19 kana federa kara $300 akka dhaabdu himtee jirti. sagantaa kunis June 19th kan dhaabatudha.
Nebraska fi South Dakota keessati hojiidhandoonni muraasa akka jiran himan akka state biraatif.
Oromo News 05.21.21
By Person: Fatiya Adam • May 22, 2021
Oromo News 05/21/2021
State Siouxland sadii keessati dhukkubni corona virus xiqqaacha deemu jira.
Iowa keessati qoranoo bultii 14 godhameen namni corona virus qabamee jiru parsantii 3%dha kunis baaye xiqqaachu kan mullisuudha.